T-shirts nemapini evashandi veApple vari kukwikwidza mu #CloseTheRings | Ndinobva mac
T-shirts nemapini evashandi veApple vari kukwikwidza mu #CloseTheRings
Ichokwadi ndechekuti nyaya yekurovedza muviri muApple chinhu chatinogona kutaura kuti chiri mufashoni uye kune vazhinji vashandisi avo, nekuda kwekutengwa kweApple Watch, vatanga kuita kwavo kwepanyama kana kuti vakatombozvivandudza zvakanyanya. Zviripachena icho chinhu chaicho chaicho uye yega yega inoitisa chiitiko ichi, asi iyo Apple Watch inobatsira. Mune ino kesi izvo zvatiinazvo patafura ndizvo kukwikwidzana kwemukati pakati pevashandi veApple avo kune avo vanogovana zvavanowana vanopedzisira vawana zvipo zvepanyama uye vamwe vevashandi ava vari ku tweeting "kuti tiite godo" pasocial media.
Uye ndezvekuti t-shirts nemapini anoiswa nekambani pachayo yevashandi vanokwanisa kukunda vamwe vese nezviitiko zvavo zvepanyama sekutsanangurwa kwazvakaitwa pawebhu WatchGeneration. Makwikwi aya akavhurika kune vangangosvika zviuru makumi mana vashandi vekambani vanogashira mubairo wavo nekuzadzikisa kubudirira pamwe nekushandisa chiitiko cheApple Watch uye nekugovana chiitiko ichi pamwe nevamwe vashandi vekambani. Ava ndevamwe vevashandi vane zvipo izvi zvakawanikwa zvakananga kubva kukambani, izvo zvakaonekwa online:
1 mhete yekutonga ivo vese! #closetheringschallenge #wellnesschallenge #gold #tshirt #goforthegold
Chinyorwa chakagovaniswa naSarone (@sizzles) pa Apr 5, 2017 pa 2: 20pm PDT
Isu tinozviwana chiri chinhu chinonakidza kusimudzira chiitiko chemuviri, kunyanya kune avo vasina kuita chero kurovedza muviri vasati vaine Apple Watch, kune avo vakaita mitambo zvisati zvaitika sechipo chakareruka chinozovasimudzira zvishoma. Zvingave zvakanaka kana kusimudzwa kwemukati uku kukawedzerwa kuzviuru zvevashandisi vane iyo Apple Watchasi panguva ino zvinoita sekunge izvi hazvigoneke
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » T-shirts nemapini evashandi veApple vari kukwikwidza mu #CloseTheRings
Bhatiri reApple laptops, iro rinoenderana zvakanyanya nekuremekedza vanokwikwidza naro
Apple Inoburitsa Yechipiri Veruzhinji Beta yeMacOS 10.12.5